Jose Mourinho sheekadan kama aqbali doono Man United haddii uu xilka u qabto – Gool FM
Jose Mourinho sheekadan kama aqbali doono Man United haddii uu xilka u qabto
Byare May 6, 2016
(Manchester) 06 Maajo 2016. Tababarihii hore ee Chelsea Jose Mourinho ayaa aad u doonayo inuu qabto xilka Man United xilli ciyaareedka soo socda laakiin waxaa adkaan doonta inuu aqbalo sheekada ay ku hayaan Van Gaal oo kale.
Macallinka reer Portugal ayaa dalban doona adduun dhan 10 ilaa 12-milyan oo bound sanadkiiba si uu u maareeyo kooxda Man United sida ay wararku sheegayaan.
Mourinho ayaa dhabar jab xoogan soo gaaray markii ay soo ifbaxeen wararka sheegaya in madaxa fulinta Man United Ed Woodward uu waydiistay isaga inuu sugo sanad kale ka hor inta uusan qaban xilka Red Devils.
Laakiin Jose ayaa ku adkeysanaya isku daygiisa inuu xilka ka badelo Van Gaal dhammaadka xilli ciyaareedka.
The Times ayaa sheeganeysa in Jose Mourinho uu waydiisanayo mushaar sanadkiiba dhan 10-milyan iyo 12-milyan oo bound.
Sikastaba, waxay wararku soo jeedinayaan in 53-jirka laga yaabee inuusan jeclaysan qaabka uu mushaarka iminka u qaato Van Gaal.
Tababaraha reer Holland ayaa qaata mushaar kala go’go’san sanadkiiba 8-milyan oo bound, iyadoo uu mushaarkiisa aasaasiga uu yahay 3.3 milyan.
Van Gaal ayaa lacagaha harasan u kala qaata 2-milyan daacadnimada, 1.6 milyan oo kaga imaaneysa xuquuqda sawiradda iyo 1.1 milyan haddii uu Man United u soo saaro Champions League.
Tababarihii hore ee xulka Holland ayaa sidoo kale heli lahaa lacago gunno ah oo dhan 1.5milyan oo bound haddii uu ku guuleysan lahaa CL iyo lacag intaa la mid ah haddii uu qaadi lahaa Premier League.
Sidey ahaataba, uma badna in Jose Mourinho uu aqbali doono in mushaaraadkiisa loo kala qoon qoondeeyo sida Van Gaal oo kale.
“War odayga maxaa sidaan loo yeelay,”. Xiddigaha Barcelona oo bur iyo ukun ugu qubeeyay Alves….(Ogoow sababata)+SAWIRRO